बलात्कारपछिको बालिकाको हत्या, झनै रहस्यमय बन्दै पुरिएको! नगद भेटियो - Nepal News - Latest News from Nepal
बलात्कारपछिको बालिकाको हत्या, झनै रहस्यमय बन्दै पुरिएको! नगद भेटियो
By nepalnews	 Last updated Jun 11, 2017
सुरुङ्गा (झापा) ।
“के कारणले बालिकाको हत्या भएको हो सो विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ”, प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन लिम्बूले भने,– “हत्यामा संलग्न अधिकारीलाई कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।”
स्थानीय हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययनरत बालिकाको अनुहार, टाउको र छातीमा बन्चरो प्रहार गरी गत बुधवार हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो ।
तुलसीपुरका प्रतिष्ठित व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठसहित दुई जना अपहरण